Okokufundisa: landa izincwadi zohlelo lwe-Kindle olutholakala kumadivayisi eselula namathebulethi | Onke ama-eReaders
Okokufundisa: landa izincwadi zohlelo lokusebenza lwe-Kindle olutholakala kumadivayisi weselula namathebulethi
Enye yezinhlungu zekhanda zabasebenzisi abaningi behlukile Izinhlelo zokusebenza zomusa ezitholakalayo zombili amadivayisi weselula namathebulethi ukulanda ama-eBooks ukuze uwafunde, okungahle kubonakale kungenjalo, yi- ukusebenza okulula kakhulu engizozama ukukuchazela ngakho ngalesi sifundo engikubize ngokuthi; landa izincwadi zohlelo lokusebenza lwe-Kindle ezitholakala kumadivayisi eselula namathebulethi.
Lesi sifundo senziwe ngohlelo lwe-Kindle lwe-iPad nezithombe ozozibona kuso sonke isifundo zenziwe ku-iPad, noma inqubo esizoyichaza ngezansi ifana ncamashi kunoma iyiphi ithebhulethi noma idivayisi yeselula.
Okokuqala kufanele iya kuwebhusayithi ye-Amazon bese esigabeni sama-eBooks lapho esingakhetha khona emakhulwini ezincwadi, ezinye zazo mahhala futhi ezinye zikhokhelwe.
Lapho sesikhethe incwadi esifuna ukuyilanda ngethebhulethi noma ngomakhalekhukhwini wethu, kufanele sichofoze isihloko, kulokhu sithathe isinqumo sokulanda i- «El Cuervo», enentengo yama-zero euros.
Uma usungaphakathi kwekhasi lencwadi uqobo kuzofanele sinqume ukuthi sifuna ukuyithumela kuphi i-eBook. Kubalulekile imininingwane kuleli phuzu ukuthi i-Amazon, yize incwadi inenani lama-euro angama-euro, ihlala ikhuluma ngokuthenga nokukhokha, ngakho-ke akufanele wesabe ngoba uma incwadi imahhala, awusoze wakhokhiswa mali ikhadi noma i-akhawunti yasebhange.
Endabeni yami, nginamadivayisi amabili atholakalayo ukuthumela i-eBook, ngakolunye uhlangothi i-iPad ebengikhuluma ngayo ne-Kindle Fire HD. Ezimweni zombili inqubo iyafana, sikhetha idivaysi bese sicindezela inketho «Thenga manje ngokuchofoza okukodwa».
Lapho inqubo isiqediwe, i-Amazon isazisa ukuthi ukuthengwa kwenziwe ngempumelelo.
Uma siya ku-Kindle application kuthebhulethi noma kudivayisi yethu yeselula siyabona ukuthi i-eBook isivele itholakalela ukufundwa.
Imininingwane engaphezulu - Okokufundisa: Landa amaphephandaba nomagazini ku-Kindle wakho ngemizuzwana engaphansi kwengu-30 futhi mahhala
Indlela ephelele ye-athikili: Onke ama-eReaders » izinkampani » Amazon Kindle » Okokufundisa: landa izincwadi zohlelo lokusebenza lwe-Kindle olutholakala kumadivayisi weselula namathebulethi
Incwajana yedijithali yakwaSony iphinde ibonakale
Izizathu eziyi-9 zokuthenga i-eReader ngaphezulu kwencwadi yamaphepha